Ngwa nke igwefoto gimbal 3-axis stabilization na nyocha okporo ụzọ UAV
Na omenala, nleba anya n'okporo ụzọ dị na IPC, ITC, Dome na akụrụngwa ndị ọzọ iji nweta nyocha oge nke ugbo ala. E jiriwo ihe ngwọta ndị a kemgbe ọtụtụ afọ ma tozuru oke. Otú ọ dị, na mmepe nke ọhụụ ọhụụ okporo ụzọ awara awara, emezighị emezi a ...
Ohere nke mbugharị igwefoto dị nso dị nso
Na onyunyo ogologo, ụzọ ọdịnala bụ iji lens cctv motorized dị ka Fujifilm na IPC. N'ime afọ abụọ gara aga, site na itinye igwefoto igwefoto ogologo oge, igwefoto ngọngọ nke 300mm ~ 500mm ji nke nta nke nta loda, nke nwere njirimara o ...
OIS na EIS nke mbugharị igwefoto mbugharị
Okwu Mmalite nkwado nke ihe eserese dijitalụ tozuru etozu, mana ọ bụghị na oghere igwefoto CCTV. Enwere ụzọ abụọ dị iche iche iji belata mmetụta ahụ na-adịghị mma-cam. Igwe anya na - eme ka ihe onyoonyo jiri ngwa ngwaike di n’ime oghere iji mee ka onyonyo ahụ guzosie ike ma jide ya nkọ. Ọ bụ ...
Ele Sheen nwere ike inye NDAA ese foto na mbugharị mbugharị. Okwu Mmalite Okwu Sheen Mstar mbugharị igwefoto na-akwado 100% NDAA. Ọ bụrụ nuru banyere ndepụta ojii USA maka ngwaahịa dịka Hikvision, Dahua na Huawei, mgbe ahụ ị nwere ike ịtụle ile anya ...
Ojiji nke elektrọnik na ngwa anya defog na lens cctv ogologo nso
E nwere ụdị teknụzụ teknụzụ abụọ. Optical defog N'ozuzu, 770 ~ 390nm anya ìhè apụghị ịgafe site foogu, Otú ọ dị, Infrared nwere ike gabiga foogu, n'ihi na infrared nwere ogologo wavelength karịa anya ìhè, na a doro anya na ihe diffraction mmetụta. Nke a p ...
Uru nke 4 megapixel mbugharị ngọngọ igwefoto modul
Mkpokọta mbugharị igwefoto igwefoto na-agabiga kpamkpam na oge kpakpando 4MP. Mgbe ndị mmadụ kwupụtara igwefoto kpakpando na-acha ọkụ, ha na-echekarị maka arụmọrụ nke igwefoto ihe ntanetị nke 2MP. Mana site na nkwalite na ewu ewu nke ngwa AI, adịghị ike nke 2MP starlight cam ...